Rahavavy Zipora sy Rachael ny fahitana ny fampakarana | Apg29
"Nahoana ianao, nahoana ianao no tsy maika ny fitoriana ny filazantsara? Tsy hitanareo? Tsy misy fotoana bebe kokoa!"
Ny zava-drehetra natao ho ara-dalàna, tsy nisy niteny na nitory momba ny fampakarana. Ny olon-drehetra toa variana amin'ny tenany ihany izy. Dia nisy tampoka fampakarana.
Hoy aho, ary rehefa tonga rehefa nanontany ny Tompo Jesoa Kristy, ary ny anjely maro tao an-trano. Raha Michael sy Gabriela, ka nanamora ny nanaovana ny voninahitra Mpanjaka rehefa tonga. Tena nalahelo i Jesosy. Izy niantso ka naneho ahy ny zava-nitranga teny amin'ny lanitra roa andro lasa izay.
Andriamanitra dia nanome baiko ny anjely nitsoka ny trompetra farany. Rehefa lasa ny anjely mba hitsoka nahita an'i Jesoa teto an-tany. Hitany ny fijangajangana, ny fanitsakitsaham-bady, ny ratsy, ny olona dia tsy ny saina ho an'Andriamanitra.
Jesosy, raha nahita izany, dia nihazakazaka ho any amin'ny Ray ny tongony, dia nikarapoka, ka nanomboka nitomany, dia nangataka fotoana bebe kokoa ka nanao hoe:
"Tsy vonona izy ireo ianao!"
Jesosy niantso be dia be, ary ny Ray dia tena mangoraka manerana izao tontolo izao, fa hoy izy:
"Tonga ny fotoana!"
Izy no leo ny zokiolona mampihemotra.
Fa rainy kosa nanao tamin'ny anjely:
Ny anjely dia tsy mitsoka ny anjomara, fa mbola ao amin 'ny toerana. Dia hoy Jesosy fa tokony ho natao roa andro talohan'izay. Ary Jesosy niantso ka nanao hoe:
"Am-po toy inona aza izy ireo? Stone Fo? Raha tonga aho roa andro talohan'izay, dia maro no sisa, koa ny sasany tamin'ireo mpikambana ao amin'ny fianakavianao. Ankehitriny dia ho andro fahoriana lehibe."
Hoy izy hoe:
"O Anaka, mankaty amiko izao. Ny fahoriana lehibe, dia ho toy izany mahatahotra. Ilay nolazaiko tsy handao na hahafoy anao, fa nahoana no nahafoy ahy? Kesika ny foko ho an'ny zanako efa nahafoy ahy!"
Ry malala, alina aho dia nanana ny tsindrimandry amin'ny fisandratana. Hitako ny tany dia tena sahirana amin'ny asa. No ilay efa foana ny zava-drehetra dia tahaka ny efa teny ampandehanana. Nojereko tsikelikely mandeha eny ny lalana, mivaky loha rehefa hitako ato ivohoko, ry Jesosy. Hoy izy hoe:
Hitako fa nitranga tamin'ny Alahady, ary maro no tavela. Ao amin'ny fiangonana izay misy afa-tsy ny mpitandrina sy ny vadiny hongotana mandrakizay, izy ireo no hany mahatoky. Reny bevohoka manjavona, fa nitoetra.
Ary hitako fa, indro, izay nihevitra ny Kristianina tsy nivadika izy ireo, fa ireo sisa, ary izy ireo nanana horonan-taratasy izay ny fahotany no voarakitra. Aho nahita pasitera izay teo, rehefa nandray ny horonan-taratasy ny fahotana izay nataony izay izy sisa. Dia niantsoantso izy ireo hoe:
"Koa ho vonona koa ianareo; fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no tahaka anareo, ny Zanak'olona avy!" Matio 24: 44
"Tsarovy Lot hustru.den izay mitady hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay mamoy ny ainy no hamonjy izany!" Lk.17: 32, 33